Izimonyo zezingane zemvelo
Izimonyo zezingane zihluke kakhulu ezimonini ezenzelwe ukusetshenziswa kwabantu abadala. Isikhumba somntwana sibucayi kakhulu futhi sinethenda. Kudinga ukunakekelwa ngokucophelela nokunakekelwa, ngakho-ke ikakhulukazi ezinganeni, lonke uchungechunge lwezimonyo ezikhethekile luyasungulwa. Izimonyo ezinjalo zenzelwe ukondla, zithuthukise futhi zinciphise isikhumba somntwana. Izinkinobho zezingane zifaka imikhiqizo yokugeza engeke ibangele ngesikhathi sokugeza futhi ungangena amehlo.
Izimonyo zezingane zithuthukiswa ngokuvumelana nezidingo eziqinile ezibekwe kulolu hlobo lomkhiqizo. Kufanele kube semvelo, iphephile futhi i-hypoallergenic. Ekubunjweni kwayo kufanele kube izithako zemvelo kuphela, ukusetshenziswa kwayo okuba nomthelela omuhle esikhumbeni somntwana, kuvimbela ukuthuthukiswa kwesikhumba se-dermatitis. Izingxenye zemvelo zinciphisa amathuba okugula izingane.
Ukunakekelwa nezimonyo kufanele kusekele ukulinganisela okubucayi kwesikhumba somntwana. Isikhumba somntwana sikwazi ukubekezela kalula, ngakho akufanele sihlangane nama-synthetic dyes, amakha, ama-preservatives. Yingakho izithako zemvelo zezimonyo, ezisetshenziselwa ukukhiqizwa kwazo, kufanele zenze izimo ezihle kakhulu ekuthuthukisweni okunempilo kwesikhumba.
I-Cream yezingane ingenye yezindlela eziyisisekelo zokuqhamba kwezingane. I-cosmetology yanamuhla inikeza ama-creams amaningi okunakekela isikhumba somntwana. Kuyinto ukhilimu wokusetshenziswa kwansuku zonke ngomphumela wokugcoba nomswakama, izikhwama zokuzivikela ezivela emoyeni oqinile neqhwa, i-diaper cream, njll.
Cishe kuwo wonke uchungechunge lwezimonyo zezingane ngempela kukhona izindlela ezahlukene zokugeza izingane. Abanalo hlangothi lwe-pH, ngakho-ke ababangeli izinyembezi ngesikhathi begeza, abacasuli amehlo nesikhumba somntwana. Futhi flavour izithelo zemvelo, ezitholakala ekubunjweni kwezimonyo zezingane, ngokuqinisekile njengomntwana nokugeza ngaye kuyoba injabulo enkulu.
Ngaphandle kwemikhiqizo yokugeza nokuhlanzeka komuntu, uchungechunge lwezimonyo zezingane lungabandakanya izimonyo zokwelapha. Kumele futhi kudalwe kuphela ngesisekelo sezingxenye zemvelo. Kulesi simo, izimonyo zezingane zezokwelapha zingasetshenziswa kokubili njenge-agent yokuvimbela futhi njengokwelashwa. Yenzelwe ukuvimbela ukuthuthukiswa kwezifo zesikhumba nokuphendula okwenziwe. Ukuzivocavoca kubonisa ukuthi izinkinga zokuqothula nokusetshenziswa kwezimonyo zezokwelapha zixazululwa kalula futhi ngokushesha. Isetshenziselwa kabanzi ukubomvu, okwakhiwa lapho igqoka izindiza, ngokucasula okuncane kwe-etiologies ehlukene.
Lapho ukhetha izimonyo zezingane zemvelo kufanele ukhokhe ngokukhethekile ukwakheka kwawo. Ungabi ovilapha kakhulu ukulifunda, ngisho noma izingxenye ezipakethe zifakwa ohlwini lokuphrinta kakhulu. Njalo ulandele umthetho wokuthi izimonyo zomntwana akufanele neze ziqukethe izithako zokwenziwa.
Sicela uqaphele ukuthi izinkampanini ezinhle ezikhiqiza izimonyo zemvelo ezinganeni futhi ziwazisa amakhasimende abo zihlala ziqondiswa yimithetho elandelayo:
ungasebenzisi izinto zokusetshenziswa eziphansi ezishibhile (i-paraffini), imikhiqizo yokuhlanzwa amafutha, i-paraffin (amaminerali) amafutha ekukhiqizeni, njengoba igqoka ama-pores esikhumba;
Ungasebenzisi noma yimaphi ama-synthetic dyes nama-perfume, kanye nama-parabens. Izimonyo zabakhiqizi abanjalo zidalwe kuphela ngesisekelo sokulondolozwa kwemvelo noma okufana nemvelo, evunyelwe ekukhiqizeni izimonyo zezingane. Umkhiqizi onokwenkolo uyohlale ekhetha izinto eziwusizo ezitshalwa emasimini alawulwayo noma ezitshalweni zasendle eziqinisekisiwe;
ngeke isebenzise izinto ezivela emfuyweni (i-mink, amafutha ezilwane, i-collagen yezilwane) futhi ngeke isebenzise imikhiqizo ye-genetically modified.
Abakhiqizi bezimonyo zemvelo eqinisekisiwe eRussia: Aubrey-Organic, Coslys, ALPHANOVA®, Lavera Neutral, Logona, Madara, Baby Organic & Natural, Weleda, GamARde, Living Nature, Sanoflore.
Yini i-scoliosis endabeni yezokwelapha?
Ukungabaza ukuphakama. Ama-Cysts ezinganeni
Ukwethuka kagesi kwengane
Indlela yokukhetha i-home inhaler yengane
Ukuvimbela ama-rickets ezinganeni
I-pasta nenkukhu nobusi
UVladimir Friske usolwa ngokubulala uDmitry Shepelev we-ruble million ayikho
Ilayisi pasta - enempilo
Isitifiketi: indlela yokunikeza izimbali ngendlela efanele
U-Anastasia Kostenko noDmitry Tarasov bahlaselwa esitokisini sokuhlanganyela isithombe futhi bawa ngamanga
Indlela yokuchaza kumfana ukuthi ngifuna ingane?
IsiSuthu kusuka ema roses
Izinhlanzi zezinhlanzi ekhaya
Indlela yokukhetha umshini olula wokuthunga
Kungani ubuhlungu nobuhlungu kwenzeka ngesikhathi sezocansi?